Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » 2021 Global Destination Index waa la siidaayay
Global DMC Partners, shabakadda caalamiga ah ee ugu weyn ee Shirkadaha Maareynta Maareynta Madax-bannaan (DMCs) iyo bixiyeyaasha adeegga dhacdooyinka gaarka ah, ayaa daaha ka qaaday Tusaha Masiirka Caalamiga ah ee 2021, oo muujinaya kulanka ugu caansan iyo meelaha lagu dhiirrigelinayo ee adduunka oo dhan 2021, iyo aqoonsiga suuqyada mar horeba jiray. isbeddelka 2022. Warbixinta waxaa la soo ururiyey iyadoo lagu salaynayo falanqeynta jawaabaha qorshayaasha ee Shirka Q3 ee GDP & Sahanka Wadnaha Dhacdooyinka iyo dib u eegista ku dhawaad ​​1,600 kulan iyo dhiirigelin RFPs ee in ka badan 500 goobood oo Global DMC Partners ay matalaan.
Goobaha ugu sareeya ee Maraykanka
Goobaha ugu sareeya ee caalamiga ah
1. Mexico 1. Meksiko
2. Boqortooyada Ingiriiska
(England & Scotland) 2. Talyaaniga
3. Isbayn 3. Faransiiska
4. Jarmalka 4. Spain
5. Italy, Denmark, France 5. Bahamas
"In kasta oo ay muhiim noo tahay in aan dib u eegno xogtan sannad kasta, sanadkan si gaar ah ayaa muhiim u ah. La-hawlgalayaashayada iyo macaamiishayada adduunka oo dhan waxay ka soo baxayaan wakhtiga aadka u adag ee xidhitaanka masiibada waxayna rabaan inay ogaadaan suuqyada aan kaliya nabdoonayn laakiin diyaar u ah kooxaha si ay u gaaraan go'aano xog ogaal ah oo ku saabsan qorshaynta mustaqbalka, "ayuu yidhi Global Partners President Global DMC Maamulaha guud ee Catherine Chaulet. "Sababtoo ah warshadeena waxay saameyn weyn ku leedahay dhaqaalaha adduunka iyadoo la isu keenayo malaayiin qof oo adduunka ah maalin kasta, waxaan dareemeynaa inaan mas'uul ka nahay inaan baaritaanno, falanqeyno oo wadaagno macluumaadkan muhiimka ah."
Chalet wuu sii waday, “Marka la eego natiijooyinka Kulankeena Q3 & Dhacdooyinka Sahanka Wadnaha, waxay si cad u muujinayaan sida sanadka 2021, qorshayaasha Yurub ay ugu sii nagaanayaan barnaamijyadooda. Si la mid ah ayaa run ahayd macmiisha Maraykanka ee shirarka ku haya gudaha Maraykanka, ama Mexico iyo Kariibiyaanka. Si kastaba ha noqotee, marka la eego gobollada 2022 ee xiisaha leh, waxaa cad in qorshayayaashu ay runtii bilaabeen inay meelo ka baxsan goboladooda shirarka iyo dhacdooyinka ka eegaan. Tani waa calaamad weyn oo muujinaysa in ganacsigu uu bilaabay inuu dib u soo kabsado, duniduna ay mar kale noqonayso mid la heli karo."
Macaamiisha fadhigoodu yahay Maraykanka, dhammaan gobolada ka baxsan Maraykanka ayaa caan ka helaya sanadka 2022, gaar ahaan Yurub iyo Mexico ayaa hogaaminaya. Macaamiisha Yurub, dhammaan gobollada ka baxsan Yurub waxay arkayaan korodhka caanka ah, oo ay hoggaamiyaan US iyo Canada, oo ay ku xigto Bariga Dhexe iyo Mexico.